Ndị gọọmentị nke ndị ozi ga-atụle ọrụ oru ala na ụlọ ga-esonye na ndepụta akwadoro maka ụmụ amaala site na Mmemme Mmemme. Projectslọ oru ngo akwadoro kwadoro na ụzọ abụọ sara mbara:
Ozugbo anabatara ya, oru ngo nke ala na ụlọ ga-adị maka itinye ego itinye ego site n'aka ndị na-achọ maka ụmụ amaala site na itinye ego.
A choro onye choro ka o mezuo nzụta na ire ahia maka itinye ego na oru ulo oru akwadoro. A na - etinye ego itinye ego ha nhata, ha nhata ego nzụta kwenyere na akaụntụ escrow akwadoro nke ndị nrụpụta na Citizenship nke Investment Unit na Saint Lucia jikọtara ọnụ.
Ozugbo akwadoro itinye akwụkwọ maka ịbụ nwa amaala site na itinye ego na azụmaahịa ụlọ, achọrọ ntinye ego pere mpe: